Samsung Pay ayaa qaabil soo dhaweyn liidata kahelay Spain | Wararka IPhone
Samsung Pay waxay maamushaa oo kaliya inay ku guuleysato 6.000 isticmaaleyaasha 12 saacadood gudaha Spain
Louis ee Doonta | | Apple Pay, Tartanka
Halka taageerayaasha Apple ay sii wadayaan sugitaanka ay shirkaddu ka bilaabayso adeegga lacag bixinta moobaylka Spain, Samsung ayaa hoggaanka la wareegtay shalay iyadoo si rasmi ah u soo bandhigtay una soo bandhigtay dhiggeeda dalkeenna. In kasta oo aysan noqon mid bilaw u ah sidii ay ahaan lahayd, haddana runtu waxay tahay inay jiraan qaar nasiib badan oo kol horeba ku raaxaysan kara waxtarrada noocan ah ee talefannadooda casriga ah.
Si kastaba ha noqotee, sida la soo sheegay Saxaafadda Europa, Tirada dadka mar horeba hawlgelin lahaa adeeggan ka dib soo bandhigiddeeda waxay hoos u dhigi doontaa in ka badan 6 oo qof, Muuqaal aad u liita oo laga yaabo inuu kudhaco astaan ​​dhererkeedu yahay Samsung. Si kastaba ha noqotee, tirooyinkan umuuqda kuwa hoose ayaa yeelan kara sharaxaad.
La heli karo, laakiin leh xayiraad
In kasta oo noqoshada kii ugu horreeyay ee wax soosaara ay Samsung siin karto mudnaan muddo gaaban ah, haddana waxaa laga yaabaa inay caqli badnayd in la sugo in lagu dhawaaqo imaatinka adeeggan. Samsung Pay waxaa laga heli karaa Isbaanishka kaliya macaamiisha CaixaBank iyo ImaginBank, taas oo si weyn u xadideysa tirada isticmaaleyaasha marin u heli kara barmaamijkan. Tan waa in lagu daraa oo kaliya moodooyinka S7 iyo S6 (iyo noocyadooda kala duwan) ayaa awood u leh inay taageeraan, sidaas darteed xayndaabka ayaa la adkeeyay xitaa more.
Marka, layaab ma leh in tirooyinka aan ku qabaneyno bilowgan ay xoogaa yar yihiin, maadaama xaddidaaduhu weli badan yihiin. Ka socda shirkadda waxay xaqiijinayaan inay ka shaqeynayaan sidii ay taageero ugu fidin lahaayeen bangiyada iyo moodooyinka badan waqti yar, laakiin miyaanay fiicnaan lahayn inaad sugto oo aad sii deyso sii ballaadhan? Miyay u qalantaa ballanqaad adeeg cusub oo kaliya "sharafta" noqoshada qofka ugu horreeya ee bixiya?
Shakhsi ahaan, markay Apple Pay halkan soo degto - haddii meerayaashu isku toosnaadaan oo tani mar uun dhacdo - waxaan rajaynayaa in dalabku ka ballaadhi doono bilowga iyo tirada isticmaaleyaasha aan ka faaiidaysan karno laga bilaabo maalinta ugu horreysa qayb ka mid ah bangiyada gobolka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung Pay waxay maamushaa oo kaliya inay ku guuleysato 6.000 isticmaaleyaasha 12 saacadood gudaha Spain
Kuwaas kama fahmin Samsung.
Waxay ku garaacayeen NFC sanado badan oo ay ku dhejinayaan xitaa kuwa ugu hooseeya, dheh, safafka hoose, iyo hadda oo ay ugu dambeyntii go'aansadeen inay siiyaan adeeg dhab ah oo muhiim ah, way tagayaan oo waxay ku koobayaan oo keliya labada moodel ee ugu dambeeya. Caadi ah oo aan dhammaanayn bilawga!
Waa hagaag, waxay ila tahay aniga ila fiican inay sidan u sameeyeen .. Sidan ayaa ah sida ay u tijaabiyaan adeegga oo ay u arkaan sida macaamiisha ay uga jawaabaan .. intaas ka sokow in adeegyadu aysan ka dhergin .. ugu yaraanna ay hadda isticmaali karaan ..
Waxaan hayaa taleefan iPhone ah waxaanan rajeynayaa inay bilaabi doonaan inay sidaas sameeyaan, waxay ka dhigan tahay in shirkaddu ay ka walwalsan tahay in habka lacag bixinta la yimaado ... Inta ka horeysa, xitaa in yar ma imaan ...
Waxaad tahayUnFanboy dijo
6.000 kaliya ayaa leh. Waa maxay doqon fanboy hahahahaha maxaa jira? Miyaad ku xanaaqsan tahay sababta aadan u isticmaali karin Apple Pay?
6.000 kaliya ayaa dhaha hahaha. Waxaad noqon doontaa fanboy. Maxaa jira, miyaad waalan tahay inaadan adeegsan karin Apple Pay? Maalin saaxiib HAHAHA
Cusbooneysiinta WhatsApp ee "Cayaaraha Dayactirka" iyo sheeko cusub
Google ayaa sidoo kale noo oggolaan doonta inaan helno aaladaha iOS-ka